Uncategorized Archives - Khitalin Media
သငျ့ကို ဆှဲစားဖို့သကျသကျသာလာတှဲနတေဲ့ ဘဲတှရေဲ့လက်ခဏာ(၅)ခကျြ
April 12, 2021 by Khitalin Media
သငျ့ကို ဆှဲစားဖို့သကျသကျသာလာတှဲနတေဲ့ ဘဲတှရေဲ့လက်ခဏာ(၅)ခကျြ ခုခတျေမှာ တဈခြို့သော ယောကျြားလေး တှဟော မိနျးကလေးတှကေို တဏှာစိတျ သကျသကျနဲ့သာ တှဲတတျကွပါတယျ …။ ဒီလို ယောကျြားလေးတှဟော တကယျကို ယုတျညံ့ပွီး အောကျတနျးကြ သူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ …။ ဒီလို လူမြိုးတှကေို ပတျသကျ မိနတေဲ့ မိနျးကလေးတှေ အနနေဲ့ အမွနျဆုံး နောကျလှညျ့ သငျ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အကငျြ့ စရိုကျ တှကေို ဖျောပွပေး လိုကျပါတယျနျော …။ (1) သူဆကျသှယျတဲ့ ပုံစံ သငျ့ကို တဏှာစိတျ သကျသကျကွောငျ့ တှဲနတေဲ့ သူဟာ သငျ့ကို ဆကျသှယျတဲ့ အခါမှ တဏှာစိတျနဲ့ပဲ ဆကျသှယျနပေါ လိမျ့မယျ …။ ကနျြတဲ့ အခြိနျတှကြေ ရငျ မအားဘူး … Read more
တိရစ္ဆာန်သဖွယ် မိဘတွေရဲ့ (၆) နှစ်တာ လှောင်ပိတ်ထားခံရတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ် (အပြည့်စုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ကြည့်ပါ)
February 9, 2021 by Khitalin Media
တိရစ္ဆာန်သဖွယ် မိဘတွေရဲ့ (၆) နှစ်တာ လှောင်ပိတ်ထားခံရတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့အဖြစ် (အပြည့်စုံဖတ်ရန် ပုံကိုနှိပ်ကြည့်ပါ) မင်္ဂလာပါ ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ခုပြောပြမယ့် အကြောင်းလေးကတော့ ချစ်သူ ရည်း စားထားတဲ့အခါ ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားသူနဲ့ မိဘတွေကြား အဆင်မပြေတဲ့ ပြဿနာကြီးတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ တချို့မိဘတွေက နားလည်ညှိုနှိုင်းဖို့ လွယ်ကူပေမယ့် တချို့ကလည်း သိပ်ကိုတင်းမာလွန်းကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မိဘတွေက သား သမီးကို ချစ်တဲ့ အချစ်ထက် ၎င်း တို့ရဲ့အတ္တက လွန် ကဲလာတဲ့အခါမျိုးမှာ လူမဆန်တဲ့ အပြုအမူမျိုးတွေကိုတောင် လုပ်လာကြတာကို အခုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဟူးပေးပြည်နယ်က အမျိုးသမီးလေးတစ်ဦးက မိဘသဘောမတူတဲ့ အ မျိုးသားတစ်ဦးနဲ့ ချစ်ကြိုက်မိတာကြောင့် မိဘတွေက သူမကို စိတ်ဆိုးပြီး တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို ရက်ရက်စက်စက် ဆက်ဆံခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့မိသားစုက သူမကို ဂိုထောင်တစ်လုံးထဲမှာ … Read more
ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ်
December 31, 2020 by Khitalin Media
ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက်မိတယ် မိန်းမတွေဆိုတာ ညတစ်ညရဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုပါ ကျွန်တော် ကုတင်ပေါ်မှာ မအိပ်ချင်သေးပဲ လှဲလိုက် မိတယ် အသင့် အိပ်ပျော်နေရှာတဲ့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနွဲ့နွဲ့ ချစ်ဇနီးလေးရဲ့ နူးညံ့ လှပတဲ့ မျက်နှာလေးကို ကျွန်တော် သေချာ ကြည့်နေရင်းကနေ အတွေး တစ်ချို့ ဝင်လာပြီး ကျွန်တော့ဟာ ကျွန်တော် တွေးနေမိတယ် မိန်းကလေးဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့် ? ကျွန်တော်နဲ့ မင်္ဂလာ မဆောင်ခင်က မိဘအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့အချစ်တွေနဲ့ ထိန်းသိမ်းမှု့အောက်မှာနေပြီး ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်အခုကျ တစ်ချက်ထဲ ရုတ်တစ်ရက်မှာပဲ သိတောင် မသိထားတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘေးမှာ အမိန့်နာခံရင်းနဲ့ အိပ်စက်နေရပြန်တယ်ကျွန်တော့ကြောင့် တစ်သက်လုံး အတူနေခဲ့တဲ့ မိဘတွေကို စွန့်ခွာလာခဲ့ပြန်တယ် ▪ ကျွန်တော့ကို ပင်ပင်ပန်းပန်း ပြုစုရင်း … Read more
December 11, 2020 by Khitalin Media
စိတ်ချင်းဆက်သွယ်တယ် ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး စိတ်ခံစားချက်တူညီတာကို ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပြီး စိတ်ခံစားမှုနီးစပ်တဲ့ ချစ်သူတွေဟာ ပေါင်းဖက်ရ တတ်ပါတယ်။ လူဦးရေသန်းထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့ထဲကမှ အချစ်ရဆုံးသူတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူ ချစ်ရကံကြုံတာကို တမင်တကာ တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ ယုံပါသလား။ လူတစ်ယောက်ကို မုန်းမေ့ဖို့လွယ်ပေမယ့် ချစ်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့လက်ရှိချစ်နေတဲ့ ချစ်သူတွေဟာ တမင်တစ်ကာ တိုက်ဆိုင်မှုမျိုးနဲ့တော့ ချစ်နေကြရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မမြင်နိုင်တဲ့စိတ်က နှောင်တွယ်မှုတွေနဲ့သာ အချစ်ပိုနေကြတာပါ။ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်တယ် ဆိုတာဘာကို ပြောတာပါလဲ? တစ်ခါတစ်လေ သင်ပြောလိုက်၊ သင် တွေးနေ၊ သင်ဖြစ်ချင်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ အကြောင်းဟာ တစ်စုံတစ်ဦးနဲ့ တူညီနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ စိတ်ချင်း ဆက်သွယ်နေတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ချစ်ရသူ နဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ စိတ်ချင်းဆက်သွယ် ဖူးပါတယ်။ ဒါဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး … Read more
Categories Uncategorized, အချစ်ရေး
အိမ်တွင်းဖြစ်နဲ့ သင့်ရဲ့သွားတွေ သုံးမိနစ်အတွင်း ဖြူသွားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်း
November 1, 2020 by Khitalin Media
ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ မိမိသွားတွေသန့်ရှင်းပြီး ဖြူဖွေးစေဘို့ သွားဆရာဝန်ရဲ့ ဝန်ဆောင်စရိတ်က ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နီးပါးရှိပါတယ်။ ငွေကြေးပြည့်စုံတဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့လေး ငွေပေးကဒ်နဲ့ ရှင်းလိုက်ယုံပါဘဲ …။ တကယ်ဆိုရင် မိမိအိမ်တွင်းမှာ ဈေးတွင်းမှာ ဝယ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့တင် မိမိသွားကို အလှဆင်လို့ ရတယ်ဆိုတာ မေ့နေကြတယ်။ အမေရိကားမှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ လူမည်းတွေရဲ့ ဖြူဖွေးအောင် သွားတိုက်နည်းလေးတခုပါ။ အသားမဲပေမယ့် သူတို့သွားတွေ အမြဲတမ်း ဖြူဖွေးနေအောင် အဲ့ဒီနည်းနဲ့လုပ်တာပါ …။ ထူးထူးခြားခြား ရှာစရာမလို.. သံပရာသီး (သို့)သံပယိုသီးနဲ့ မုန့်ဖုတ်တဲ့ ဆော်ဒါမှုန့်တို့ ရောစပ်နည်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။သံပရာတစ်လုံး၊ မုန့်ဖုတ်ဆော်ဒါ နှစ်ဇွန်း ရောမွှေရပါတယ်။ ပထမဆုံး ဆော်ဒါမှုန့်ကို ပုဂံလုံးထဲထည့်ပြီး အပေါ်ကနေသံပရာသီးအရည် ညှစ်ချလိုက်ယုံဘဲ။ အမြုပ်တွေထလို့ ကြောက်မသွားပါနဲ့။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ခဏကြာတော့ သွားပွတ်တံနဲ့ … Read more
September 5, 2020 by Khitalin Media
ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင် အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင် ၊ ဖခင်တွေက အဓိက ပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင် ရက်သား ကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ ပိုပြီးအဓိက ကျသွားပါပြီ ။ ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့ အရာဟာ ငွေကြေး ပိုင်းရယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့လည်း အများကြီး ဆက်နွယ်နေပါ သေးတယ် …။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အအောင်မြင် ဆုံးနေရာကို တွန်းပို့နိုင်သလို အနိမ့်ကျဆုံး ဖြစ်အောင်လည်း ဆွဲချတတ် ပါသေးတယ် ။ ဒီတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ဘယ်လောက်တောင် အဓိက ကျတတ်သလဲ ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအချက် လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားလဲ ဆိုတာကို ကြည့်လိုက် ကြရအောင်နော် …. … Read more
ပွင့်လင်းမှုမရှိတဲ့ အချစ်ရေးမှာ ကြုံတွေ့လာရမယ့် နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးများ
August 19, 2020 by Khitalin Media
ချစ်သူတွေဆိုတာ အားလုံးထက် အနီးစပ်ဆုံး သူတွေဖြစ်သွားကြပြီဖြစ်လို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ချစ်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဖုံးကွယ်ထားတာတွေ သိပ်များတဲ့ စုံတွဲတွေက တကယ်တမ်းမှာတော့ အချစ်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု အစစ်အမှန်ကို မခံစားရတတ်ပါဘူး။ အပင်ပန်းဆုံး အလုပ်တွေထဲမှာ ဟန်ဆောင်ခြင်းဆိုတာလည်း ပါဝင်ပြီး မပွင့်မလင်းတဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတယ်ဆိုတာကလည်း ဟန်ဆောင်မှု တစ်မျိုးပါပဲ။ ပွင့်လင်းမှုမရှိတဲ့ အချစ်ရေးမှာ ဒီလိုအကျိုးဆက်တွေ ရှိလို့နေပါတယ်။ သဘောထား ကွဲလွဲမှုတွေ freepik by freepikလူတွေအမြင်မှာတော့ သူနဲ့ကိုယ်ဟာ ချစ်သူတွေဆိုပေမယ့် ပွင့်လင်းမှုမရှိတဲ့အခါ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် သေချာမသိပဲ အခက်အခဲတွေ ပိုများတတ်ပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အသေးအမွှားလေးတွေကအစ လိုက်ညှိဖို့ ခက်ခဲသလို နှစ်ယောက်လုံးက စိတ်ပင်ပန်း၊ လူပင်ပန်းတာတွေ ကြုံတွေရတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာရတတ်ပြီး ဒါတွေက … Read more
သဲသဲလှုပ် အချစ်ခံရစေမယ့် နည်းလမ်းလေးများ
August 18, 2020 by Khitalin Media
မိန်းကလေးများအတွက် ချစ်သူရဲ့ သည်းသည်းလှုပ် အချစ်ကိုခံရတာလောက် ကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အရာ မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲလိုအချစ်ခံရဖို့ လိုက်လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဘာတွေလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးမယ်နော်။ (၁) ချွဲပါ အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်ချစ်သူ စိတ်ကြည်နေတဲ့အချိန်တွေမှာ ချွဲပေးပါ။ အိုဗာကြီးတော့ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်။ ဥပမာ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေကို သူ့ကို လုပ်ခိုင်းတာတို့၊ ကလေးလေးလို ပြုမူပြတာတို့၊ ရုပ်ပြောင်ပြတာတို့၊ သူ့ကို ပွတ်သီးပွတ်သပ် လုပ်ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ကို ကလေးလေးတစ်ယောက်လို မြင်ပြီး စိတ်ကြည်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တော့ အချစ်တွေ ပိုတိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂) သူ့ကို ကြင်နာပြပါ ယောက်ျားလေးတွေက အသည်းမာတဲ့ အသွင်ဆောင်ပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ သူတို့ဟာ အရမ်းကို စိတ်ပျော့ကြပါတယ်။ အချော့ကြိုက်တာ၊ ကြင်နာတာကို ကြိုက်တာ … Read more
အရင်းနှီးဆုံးလူတွေရဲ့ နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးတာမခံရအောင် ဒီအရာတွေကိုလျှို့ဝှက်ထားပါ…
August 17, 2020 by Khitalin Media
ကျွန်မတို့တွေဟာ ကိုယ်နဲ့ခင်နေတဲ့ သူတွေအပေါ် အလွန်အမင်း ယုံကြည်တတ် ကြတဲ့ စိတ်လေးရှိ ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲ ဆိုတော့ သူကတော့ ငါ့ကိုမကောင်းကြံမှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ သူကတော့ ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ယုံကြည်စိတ်လေးပေါ့။ သဒ္ဒါလွန်တော့ ကျွန်ဖြစ်ဆိုသလို ယုံကြည်မှု လွန်ကဲတဲ့ အခါ ဒုက္ခရောက် ကြရပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အယုံလွန်ပြီး ဒုက္ခမရောက်ရအောင် ဒီအကြောင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှဖွင့် မပြောပါနဲ့။ အတိတ်ကအမှားလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း အတိတ်က အမှားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လျှောက်မပြောပြ ပါနဲ့။ ကျွန်မတို့ကယုံကြည်လို့ပြောတာဆိုပေမယ့် တစ်ဖက်လူက ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုသဘောထားလဲ မသိနိုင်ဘူးလေ။ အခန့်မသင့်ရင် ဒါကို အသုံးချပြီး ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တာ၊ နှိမ့်ချတာမျိုးလုပ်လာနိုင်တယ်မဟုတ်လား။ ဒါကြောင့်မို့ အတိတ်ကကိုယ်အမှားလုပ်မိခဲ့ရင်လည်း အဲ့ဒီအမှားနဲ့ပတ်သက်လို့ လူတွေဆီမှာ ဝန်ခံနေဖို့မလိုပါဘူး။ အတိတ်ကိုအတိတ်မှာထားခဲ့ပါ။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ ကျွန်မတို့မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမတူညီနိုင်ကြပါဘူး။ ကိုယ့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအတွက် … Read more
စုံတွဲများရန်ဖြစ်ခြင်းရဲ အကျိုးကျေးဇူး (၁၀) ချက်
August 15, 2020 by Khitalin Media
စုံတွဲများရန်ဖြစ်ခြင်းရဲ အကျိုးကျေးဇူး (၁၀) ချက် အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စကးများရန်ဖြစ်ခြင်း တစ်ခုတည်းက သာလျှင် ဘယ် relationship မှာ မဆို ကောင်းတာပါ။ ရက်စက်မှုတွေနဲ့ အခြေအမြစ် မရှိတဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် စကားများတတ်ကြ ပါတယ်။ စကားများရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးက နားလည်ဖို့ မကြိုးစားရင် အလကားပါပဲ။ သဘောထားကွဲလွဲတာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် မျိုသိပ်ထား ခံစားချက်တွေ ပွင့်ထွက်လာတဲ့အခါ စကားများ ရန်ဖြစ်ကြပါတယ်။ 1.စကားများရန်ဖြစ်ခြင်းက အငြင်းပွားဖွယ်ကိစ္စတွေနဲ့ အထင်လွဲမှုတွေကို ရှင်းလင်းပေးတယ်။ တစ်နေ့တစ်ခါ စကားများရင် အထင်လွဲမှုတွေ လျော့သွားမလားနော်။ သင်တို့ရဲ့ပြဿာနာတွေကို အော်ဟစ်ပြီး ဖြေရှင်းပါ။ စာရေးပြီး မဖြေရှင်းပါနဲ့။ 2.စကားများရန်ဖြစ်ခြင်းက သင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကို ပိုပြီးခိုင်မြဲအောင် ချည်နှောင်ပေးတယ်။ စကားများခြင်းနဲ့ ကတောက်ကဆဖြစ်ခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ နောက်ထပ် ကတောက်ကဆဖြစ်ခြင်းတွေ ရှိနိုင်သေးတယ်လို့ … Read more